Qoraal Cilmiyaysan Oo Lafa Guraya Qorshaha Iyo Kharashka Miisaaniyad Sannadeedka 2018 (Miisaaniyadda Madaxtooyada)
(Hadhwanaagnews) Thursday, October 11, 2018 13:35:55
Maqaalkan Waa taxane aan ku eegi doono qaabka loo qorsheeyay miisanayad sannadeedka Jamuuriyadda Somaliland ee 2018-ka, inaga oo barbar dhigi doona Miisaaniyaddii 2017-kii ee Somaliland, waxaanan guud mari-doonaa Hay’addaha dowladda iyo Wasaaraddaha kala duwan sida loogu qoondeeyay kharashaadka kala duwan ee miisaniyadda qaranka.
Waxaanan isbarbardhig doonaa shaqooyinka mihiimka ah ee horumarka iyo kobac dhaqaalah dalku u baahanyahay in la maalgaliyo amba mashriica wax ku oola laga fuliyo iyo meelaha amba waxayaaba misaaniyadda lagu qorsheyay qarashadkeeda, waxaan siddoo kale isku eegi doona xukuumaddii hore iyo miisaniyadeed 2017 iyo tan hadda 2018 waxay ku kala duwanyihiin.
Sidoo kale waxaan falanqayn doonaa ujeedada qarsoon ee wasaaradaha qaarkood la isgugu daray
sida Wasaaradda Kaluumaysiga iyo Wasaaradda Xanaanad Xoolaha, amba xafiisayada iyo hay’adaha gaarka ah ee la isku daray amba wasaarado la raaciyay iyo sida loo maareeyay kharashadkoodii iyo ujeedooyinka ka danbeeya.
Miisaniyadda Jamuuriyadda Somaliland waa mid sii kordhaysay laga bilaabo 2010 – 2018 ka, taasi oo ka kordhayasay dhanka cashuur ururinta maadaama oo aan dowladdu lahayn ilo wax soo saar, Sida kobcinta xoolaha nool, kalluunka iyo macadantaba, balse dowladdu waxay taqaana sida muwaadiniinta looga cashuuro ganacsigooda iyo alaabaha ay la soo dagaan. Cashuurtaasina waxay ka timaaddaa laba qaybood oo kala ah, cashuuraha barriga iyo cashuuraha kastamada, labadan qayboodba waa kuwa dowladda u ah ilo dhaqaale ururineed ee miisanayadda qaranku ku dhisantahay.
Warbixin uu soo saaray bangiga adduunku sannadkii 2017 waxaa uu ku sheegay in lagacta dalka Somaliland oo dhan dhex-taala ay tahay 1.4 billion dollar, iyada oo ay ku jirto miisanayadda dowladda oo ahayd 347 million dollar. Sidaa darteed dowladdu way gaadhsiin kartaa miisaniyadeeda 500 million dollar, siddii uu ahaa barnaamij siyaadadeedkii xisbiga KULMIYE, iyadoo kordhinaysa cashuuraha kala duwan ee dowladdu qaaddo. Laakiin taa macaneedu ma aha in dhaqaalihii dalku koray ee waa muwaadinkii oo culays la saaray, korniinkii ganacsiguna hoos u dhacay maadamo oo cashuuraha laga qaadayo laba ama saddex jeer la libinlaabay.
Haddaba aan u fiirsano kala duwanaanshaha iyo u jeedooyinka gaarka ah ee ka muuqda qorshaha sannadlaha ah miisaaniyadda qaranka 2017-ka iyo tan 2018-ka gaar ahaan xafiiska ugu sarreeya ee dalka looga taliyo kaas oo ah Xafiiska Madaxtooyada Jamuuriyadda Somaliland.
Xafiiska Madaxtooyada Somaliland.
Xafiiska madaxtooyada somaaliland waxa uu leeyahay miisanayad kala gaar ah oo ay ka mid yihiin:- Miisaaniyadda Mushaharka iyo Gunadda Madaxwaynaha JSL, Xafiiska Maddaxwayne ku Xigeenka JSL, Ciidanka Ilaalada Maxatooyadda iyo Xafiiska Madaxtooyada.
Miisaniyadda madaxtooyada waxaa loo kala saaray afarta qaybood ee sare ku xusan, miisaniyadda xafiiska madaxtooyadu sannadii 2017-ka waxay dhammayd 56,534,978,865 SL/shilling, sanadkan 2018 waxay dhan tahay 120,671,383,042 SL/Shilling korodhka miisanayaddu wuxuu dhanyahay 64,136,404,177 SL/Shiling dhanka kale miisaniyadda ciidanka ilaalada madaxtooyadu sannadkii 2017 waxay ahayd 18,729,991,791 SL/Shiling sanadkan 2018 waa 23,851,626,984 Sl/Shilling. Koradhka miisanayddan ciidanka ilaaladu wuxuu ka badanyahay miisaniyadda Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta.
Haddaba inta aynaan si qoto dheer u guda galin miisaaniyadda xafiiska madaxtooyada aan isbarbar dhig kooban ku samayano miisaaniyadda Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada iyo isku gaynta miisaaniyadda Ciidanka Laanta socdaalka iyo Ciidanka dab-demiska oo Miisaniyadoodu dhantahay 19,171,441,416 SL/Shiling xagga miisaniyadda ciidanka ilaalada madaxtooyad ay tahay 23,851,626,984 Sl/Shilling. Waxaan la ilaawi Karin adeegayada kala duwan ee shacabka u hayaan Ciidanka Laanta Socdaalka iyo Ciidanka Dab-demisku.
Ciidanka laanta socadaalku dhammaan xuduudaha Somaliland intooda badan waxay ku leeyihiin xafiisyo waxaana uga howl gala shaqaale qaran oo ku shaqeeya duruufta maaliyadeed, kalana mida shaqaale-waynaha dowladda ee mushaharkoodu aanu kaafiyin nolol maalimoodkooda. Qaran ahaan Ciidanka Laanta Socdaalku waa kuwa ugu muhiimsan xagga amniga iyo ilaalinta cadowga shisheeyaha ah. Shaqadooduna waa mid daruuri u ah qaranka oo aad loogu baahan yahay.
waxaa Iyana biyo kama dhibcaana mihiimada Ciidanka Dab-demiska oo ah kuwa habeen iyo maalinba u heegan bad-baadinta dad iyo maalba, maalinkasta waxa aad maqlaysaa magaalada Hargeisa codka dhiilada ah ee gaadiidka Ciidanka Dab-demiska oo khatar dab ka babaadinaya naf iyo hantiba.
Waxay isticmaalan, shidaal, biyo iyo dawooyin kale oo loo isticmaalo bakhtiinta dababka kala duwan, hadda miisanayadoodu badhna kama ah tan Ciidanka Ilaalad Maxadtooyada oo shaqadood tahay …..La Soco
Qalinka: Mustafe Cabdiraxmaan Habane